ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုလိုင်စင် - သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိသင်၏ Global Partner
ယခု Quote တောင်းခံပါ
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်သည့်လိုင်စင်များနှင့်ခွင့်ပြုချက်များကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူလိုင်စင် / ပါမစ်လျှောက်လွှာပုံစံများအပေါ်ဖြည့်စွက်လမ်းညွှန်နှင့်အတူလမ်းညွှန်။
အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူလိုင်စင် / ပါမစ်လျှောက်လွှာပုံစံများအပေါ်ဖြည့်စွက်လမ်းညွှန်နှင့်အတူလမ်းညွှန်နှင့်အစိုးရအခကြေးငွေတင်သွင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေး၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်သူများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ အများပြည်သူအကျိုးတူရန်ပုံငွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လိုင်စင်၊ Sandbox လိုင်စင်၊ စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်ရန်ပုံငွေလိုင်စင်၊ ငွေလွှဲခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခြေခံသည့်အော်ပရေတာ (လိုင်စင်) လိုင်စင်၊ ) & ရန်ပုံငွေလိုင်စင်၊ ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာကြားခံ ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်စင်၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအတွက် Fund Manager နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ E-Money & Payment Institution စသည်တို့…
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှု၊ စာနာမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းတို့မှတရား ၀ င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တရားစီရင်မှုအားလုံးနီးပါးတွင်လုပ်ကိုင်နေသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
2. သင်၏ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ပြီးပြည့်စုံသော။ ဥပမာ - မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာ၊ ဒါရိုက်တာများ၏မှတ်ပုံတင်၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်အရာရှိများသို့မဟုတ်အလားတူစာရွက်စာတမ်းများ။ လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီသည် ၁၂ လထက်ကျော်လွန်ပါက၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအနည်းငယ်နှင့် / သို့မဟုတ် ၆ လသက်တမ်းရှိလိုင်စင်အမျိုးအစားနှင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အပေါ် အခြေခံ၍ ကောင်းမွန်သောရပ်တည်ချက်လက်မှတ်။
4. သင်၏ကုမ္ပဏီလည်ပတ်မှုလက်စွဲနှင့်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုအစီအစဉ်များ၊ စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒများ၊
5. ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိဘဏ္Planာရေးစီမံချက်များနှင့်အတူစီးပွားရေးစီမံကိန်း။
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုဒါရိုက်တာများ၊ အကျိုးခံစားပိုင်ရှင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊
ဘဏ်ကိုင်သူ၏ရည်ညွှန်းစာမိတ္တူမူရင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်မိတ္တူ (သုံးလထက်မပိုရက်စွဲပါ) ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိဘဏ်အားလုံးနီးပါးသည်“ ရည်ညွှန်းစာ” ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သင်စာရင်းဖွင့်ထားသည့်သင်၏ဘဏ်မှရည်ညွှန်းစာကိုရိုးရိုးလေးတောင်းခံနိုင်သည်။ ရည်ညွှန်းစာတွင်ဆက်ဆံရေးကာလ၏အတည်ပြုချက်၊ အနည်းဆုံး ၂ နှစ်၊ စာရင်းနံပါတ်၊ ထိုနေ့စွဲအတိုင်းသာရှိသင့်ကြောင်းနှင့်“ စာရင်းလည်ပတ်မှုကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်” ဟုဖော်ပြသင့်သည်။
မူရင်းသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုမိတ္တူပညာရည်ညွှန်းစာ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီ၊ CPA၊ Law Firm စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလ၏အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုဖော်ပြသည်။
Incase, အင်္ဂလိပ်ဘာသာမဟုတ်သောထောက်ပံ့စာရွက်စာတမ်းများ, ကြောင်းအမှု၌, မှတ်ပုံတင်ထားသောဘာသာပြန်များအနည်းငယ်ပြစ်မှုများအတွက်အဘို့, အပြန်အလှန်လိုအပ်သည်။
စီးပွားရေးလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အခွင့်အာဏာသည်လိုအပ်ပါက ထပ်မံ၍ စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
၁.၁ ။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း: Binary Option ကို, အနာဂတ်
၁.၂ ။ ငွေကြေးထုတ်ကုန်အပိုင်း - Forex လိုင်စင်၊ Securities and Stock Trading လိုင်စင်
၂။ စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် (Cis) & ရန်ပုံငွေလိုင်စင်
၂.၁ ။ စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် (CI S): တစ်ခုတည်းရန်ပုံငွေ
၂.၂ ။ ပိတ်ထားသောရန်ပုံငွေ
၄။ ငွေပေးချေသည့်ကြားခံ ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်စင်
၅။ Sand Box လိုင်စင် (Virtual Currency Trading လိုင်စင်)
၃။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအတွက် Fund Manager နှင့် Administrator ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း
၁။ ၀ န်ဆောင်မှုအခြေပြုအော်ပရေတာလိုင်စင်
၂။ စင်ကာပူသိုလှောင်ထားသောတန်ဖိုး (လိုင်စင်) လိုင်စင်
၁။ Securities and Stock Forex Licensev
၁။ Forex Trading လိုင်စင်
၁။ E-Money & Payment Institution များ